शम्भु श्रेष्ठ । जुन देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा तीन तोला सुन र केही कठ्ठा जमिन भएको घोषणा गर्छन्, त्यही देशलाई एसियाको तेस्रो भ्रष्टाचार हुने देश भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले घोषणा गर्छ । यो घोषणालाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? कि त नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण ढाँटेका छन् कि त ट्रान्सपरेन्सीले गलत तथ्यांक पेश गरेर नेपालको बेइज्जत गर्दैछ । जे होस्, विश्वका भ्रष्ट देशमध्ये १… विस्तृत समाचार
शम्भु श्रेष्ठ । आफूले थाम्न नसक्ने भारी प्रचण्ड र देउवाले कसका लागि बोकिरहेका छन् ? एक त सिंगो नेपाली जनमत संघीयताको विपक्षमा गइसके । त्यसमाथि पॉच नम्बर प्रदेशका लाखौं जनता टाउकोमा कात्रो बाँधेर सडकमा ओर्लिसकेका छन् । त्यहाँको जनताको माग भनेको पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन पाइन्न भन्ने नै हो । त्यहॉका जनप्रतिनिधिहरु समेत यही अडानमा छन् । तर, प्रचण्ड–देउवा भने संविधानबमोजिम तिनै तहको निर्वाचन घोषणा… विस्तृत समाचार
​कस्तो लोकतन्त्र ?
लोकतन्त्र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो । लोकतन्त्रकै माध्यमबाट अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन् । तर, हामीले ती देशहरूलाई किन पछ्याउन सकेनौँ भने हामीले लोकतान्त्रिक चरित्रको विकास गर्न सकेनौँ । लोकतन्त्र आफैँमा सबै कुरा होइन । लोकतन्त्रलाई सबल बनाउन सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो चरित्रलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने व्यक्तिहरूको चरित्र धुमिल भयो भने देश बर्बाद हुन्छ । त्यसको उदाहरण… विस्तृत समाचार